के कुल्ला गर्नु कोरोनाभाइरस विरुद्ध प्रभावकारी प्रमाणित भइरहेको छ? - THIP Media
के कुल्ला गर्नु कोरोनाभाइरस विरुद्ध प्रभावकारी प्रमाणित भइरहेको छ?
By Niranjan K Sharma
अगस्ट 16, 2020
एउटा फेसबुक पोष्टमा दाबी गरिएको छ कि कुल्ला गरेर कोरोनाभाइरसलाई मार्न सकिन्छ । डब्ल्यूएचओले कोरोनाभाइरस विरुद्ध कुल्ला प्रभावकारी रहेको कुनै प्रमाण छैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, तैपनि केही अध्ययनले कुल्ला गरेर भाइरस मार्न सकिन्छ र कोभिड -१९ बिरामीको मुखको क्याभिटीमा भाइरसको संख्या कम गर्न सकिन्छ भनेर देखिएको छ। हामी यस सन्देशलाई अर्धसत्य रहेको पाएका छौ।
काए रस नामका एक प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा साझा गरेको पोष्टमा दाबी गरिएको छ कि कुल्लाले कोरोनाभाइरसलाई मार्न सकिन्छ र यो कोभिड-१९ को लागि उपचार हुन सक्छ। उक्त पोष्टको संग्रहीत संस्करण यहाँ हेर्न सकिन्छ।
कोरोनाभाइरसमा कुल्लाको प्रभावकारिताको ’boutमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले के भन्छ?
डब्ल्यूएचओको वेबसाइटमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि कुल्लाले कुनै पनि व्यक्तिमा नयाँ कोरोनाभाइरस रोकथाममा मद्दत गरेको छ भनेर कुनै प्रमाण छैन।
के कोरोनाभाइरसको विरुद्ध कुल्लाको प्रभावकारिता जाँच्न कुनै अनुसन्धान गरिएको छ?
२९ जुलाई २०२० को जर्नल अफ इन्फेक्शस डिजिज मा “गम्भिर तीव्र श्वसन सिन्ड्रोम कोरोनाभाइरस २ बिरूद्ध विभिन्न मौखिक कुल्ला को भाइरस समाप्त गर्ने प्रभावकारिता” भन्ने एउटा अनुसन्धान प्रकाशित गरिएको छ ।
अनुसन्धानमा सुझाव दिंदै भनिएको छ कि केहि कुल्लाले कोभिड-१९ भएको बेला मुखमा भाइरस को संख्या घटाउन मद्दत गर्दछ। यसको मतलब कोभिड-१९ बिरामीको मुखमा भाइरसहरूको संख्या कुल्ला गरेर घट्छ। यधपी यसले बिरामीलाई निको पार्दैन, तर नयाँ कोरोनाभाइरस हाच्छिउं, खोकी वा कुरा गर्दा भाइरस बाहिर आएर फैलिन्छ र त्यस कारण कुल्ला गर्दा भाइरसको प्रसार घट्ने सम्भावना रहेको छ। अध्ययनका अन्वेषकहरूले सिफारिस गरेका छन्, ‘चयनित फॉर्म्युलेसनको मूल्यांकन क्लिनिकल सन्दर्भमा ‘। यस सन्दर्भमा थप क्लिनिकल अनुसन्धान अझै जारी रहेको छ।
Previous articleकोरोनाभाइरस हावामा बसदैन भन्ने सन्देश युनिसेफबाट आएको छैन
Next articleकसैले पनि विश्व वाफ सप्ताह मनाइरहेका छैनन्। यो एक नक्कली सन्देश हो
तथ्य जांच - NepaliNiranjan K Sharma - डिसेम्बर 27, 2020 0
सारांश प्रसारित भएको एउटा ह्वाट्सेप सन्देशमा रातिमा मोजा लगाएर सुत्दा दिमागलाई हानी हुन्छ भन्ने सुझाव दिएको छ। उक्त प्रश्न अनेकौँ अनलाइन फोरमहरूमा पनि छलफल गरिएको...
टिप्पणी: यो उक्त विषयमा यस भन्दा पहिला प्रकाशित लेखको अद्यावधिक गरिएको तथ्य जाँच हो - डेटोलले कोरोनाभाइरसलाई मार्न सक्छ। नयाँ अनुसन्धान खोज को कारण...
तथ्य जांच - NepaliNiranjan K Sharma - नोभेम्बर 14, 2020 0
सारांश एक सामाजिक सञ्जाल पोष्टमा दाबी गरिएको छ कि अण्डा र केरा एक साथ खानु हानिकारक हुन्छ। हामीले यस बारेमा तथ्य जाँच गर्यौं र पत्ता...
सारांश तथ्य जाँच गर्ने व्यक्तिहरू द्वारा अनेकौँ पटक खारेज गरिए पनि यो परीक्षण सामाजिक सञ्जाल, फोरमहरू र यूट्यूब भिडियोमा अझैसम्म उपलब्ध छ। यो विभिन्न जनावरहरूको...
सारांश अहिलेको महामारीले लोकप्रिय शब्द "इम्युनिटी बूस्टर" लाई जन्म दिएको छ। वैकल्पिक औषधि ब्रान्ड तथा एफएमसीजी कम्पनीहरूले समेत आफ्नो उत्पादनहरू सँग यो शब्द जोड्न थालेका...
तथ्य जांच - NepaliNiranjan K Sharma - अक्टोबर 22, 2020 0
सारांश युट्यूबमा Champ.fit भनिने च्यानल द्वारा अपलोड गरिएको एउटा भिडियोमा दाबी गरिएको छ की बाफले कोरोना भाइरसलाई मार्न मद्दत गर्दछ र कोरोना भाइरस ७० डिग्रीको...